Sales Admin Manager Archives - Glory Assumption Space
Sales Admin Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
Sales Admin Manager – Female - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀ ကျပ် ~ ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ။ • စာချုပ် (၂) နှစ်ဖြင့် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂) နှစ်မှ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ • တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ • သွက်လက်ချက်ချာပြီး စကားပြောပြေပြစ်သူ ဖြစ်ရမည်။ • Communication Skill ကောင်းသူ ဖြစ်ရမည်။ • ပေးအပ်သည့်တာဝန်ကို ကြိုးစားလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ • Sales Report, Sales Record, Sales Data Analysis များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • Data Analysis များ ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ • Computer Microsoft Word, Excel, Email ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ • Customer များနှင့် Contract ချုပ်နိုင်ရမည်။ • English4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • အလုပ်ချိန် 9:00 AM to 5:30 PM (Mon to Fri), 9:00 AM to 2:00 PM (Sat) • Uniform & Ferry Provide • သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရှိ Lighting Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောာင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ရှိ Lighting Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင် ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်း များအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျှောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 ,09263121101, 09958103983, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Admin Manager -M/F(5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။လှိုင်မြို.နယ်တွင်ရှိသော Companyတွှင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်းထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1.Sales Admin Manager -M/F(5)Posts/Salary-400000 Kyats/Hlaing Township -Any Graduate -အသက်-၃၅ အထက်ရှိရမည်။ -Exp-4နှစ်(သို.)အထက်ရှိရမည်။ -အေ၇ာင်းပိုင်း၊Promotion၊ဂိုထောင်ပိုင်းတွင်လုပ်ပေးနိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ၊ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန်)
1.Sales Admin Manager, Male/Female (5) posts
ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ အသက် ၃၅ နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ အရောင်းနှင့် Promotionပိုင်း လုပ်ပေးနိုင်၇မည်။ ဂိုထောင်ဖိုင်တွေလုပ်ပေးနိုင်ရမည်။ အတွေ့အကြုံ ၄ နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။
Sales Admin Manager - Male/Female (5posts )
ဘွဲ့ရ Advance Excel ကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၅)နှစ်ရှိရမည်။ Advance Excel Computer Test စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ [caption id="attachment_765" align="alignnone" width="455"] Young business man working together with her colleague on laptop in office. Shallow focus.[/caption]